4 cabitaan oo gubta dufanka kana takhalusi "caloosha iyo badhida" – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 4 cabitaan oo gubta dufanka kana takhalusi “caloosha iyo badhida”
caafimaad:-Helitaanka qaabka iyo culeyska saxda ah waa riyo u ah qof walba, sidaa darteed dad badan ayaa u heellan cunnooyin kaladuwan inay ka lumiyaan miisaanka oo ay gubaan dufanka ayna gaaraan riyada ah inay gaaraan jirka ugufiican.
Si kastaba ha noqotee, khubarada nafaqada ayaa sida caadiga ah kugula talinaya cabitaanno badan oo cadeeyay inay wax ku ool u yihiin gubashada dufanka ama buurnida gaar ahaan aagga caloosha, ama waxa loo yaqaan ‘rumen, iyo sidoo kale badhida ama dabada.
Cunista biyo aad u badan ayaa ah mid ka mid ah qaababka ugu fudud ee kaa caawin kara inaad hagaajiso caafimaadka guud isla markaana aad gacan ka geysato miisaanka oo yaraada iyo gubidda dufanka ku urursan dhexda si weyn.
Sida laga soo xigtay Health Line, daraasad lagu sameeyay 48 qaangaar oo miisaan culus leh ayaa ogaatay in kuwa cabay 500 mililiitar oo biyo ah cuntada ka hor, inta lagu guda jiro cunno kaloriin hooseeya ay lumisay 44 boqolkiiba in ka badan. Kuwa raacaya isla cuntooyinka si ay u lumiyaan culeyska iyaga oo aan cabin biyo ka hor cuntada, inta lagu jiro daraasadda 12-usbuuc.
Markaa talooyinka ugu fiican ee dadka cuntada cuna waa inay cabaan biyo, iyadoo la doorbidayo in la cabbo laba koob oo biyo ah cuntada ka hor
2) Shaah cagaaran
Mid ka mid ah cabitaanada ugu waxtarka badan ee miisaan lumista, daraasadaha ayaa muujiyay in cabitaanka shaaha cagaaran uu yareeyo miisaanka isla markaana uu gubo buurnida jirka, maadaama uu kicinayo dheef-shiid kiimikaad.
Daraasado badan ayaa lagu ogaaday in dadka cabba shaaha cagaaran si joogto ah u leeyihiin wax tar dhiig karka, hoos u dhigista halista cudurada halista ah sida cudurka wadnaha, kansarka qaarkood iyo sonkorowga.
Talada khubarada nafaqada waa inay isku dayaan inay ku daraan shaaha cagaaran cuntooyinkaaga maalinlaha ah, si aad u heshid koob ama labo shaah cagaaran maalinti, dabcanna doorbida inaadan sonkorta ku darin.
Dad badan ayaa jecel qaxwada ama bunka, laakiin in yar ayaa garanaya in kafeegu hodanka ku yahay kafeeynka ka caawisa inuu lumiyo miisaanka si wax ku ool ah, sidoo kale waxaa ku jira antioxidant-ka ka difaaca cudurada badan.
Daraasaduhu waxay tilmaameen faa’iidooyinka kofeynku u leeyahay luminta miisaanka maxaa yeelay waxay gacan ka geysaneysaa inuu gubo dufanka jirka ee xad-dhaafka ah, intaas waxaa sii dheer dhiirrigelinta habsami u socodka jirka.
Waxaa intaa dheer, kafeynku waxay ka difaacdaa cuduro badan, gaar ahaan kansarka iyo jahawareerka.
Xeeldheerayaasha nafaqada waxay kugula talinayaan inaad cabto koob laba ilaa labo kafee ah maalintii haddii aad isku dayeyso inaad lumiso miisaan.
4) khudaarta cagaaran oo laga sameysto sharaab.
Daraasado la sameeyay ayaa cadeeyay in cunista khudradda khudradeed ay tahay saameyn sixir ah oo ka caawisa luminta miisaanka, gaar ahaan aagga caloosha iyo barida maxaa yeelay waxa ku jira xaddi aad u badan.
Xirfadlayaasha nafaqada ayaa lagula talinayaa inay doortaan cabitaan cagaaran, sida qajaar, khudri, broccoli, isbinaajka, aastado, dhir, reexaanta, iwm., Iyada oo la doonayo in miisaanku siyaado, maxaa yeelay cabitaanka cagaaran waxaa loogu talagalay in jirka loo helo cunno isku dhafan, oo ay kor u qaaddo dheefshiidka, waxeeyna caawisaa Ka takhalus qashinka ku urursan jirka.
Casiirka cagaaran waa cunno khudradeed oo faa’iido leh, oo hodan ku ah fiitamiinnada A, K, C iyo cusbada macdanta leh ee jirka siisa tamar iyo qiime nafaqo, iyo casiirka cagaaran ayaa ka shaqeeya in laga takhaluso dufanka jirka iyo sunta.
Waxay kaloo kaa caawineysaa yareynta rabitaanka cuntada oo waxay siisaa dareen daganaansho muddo dheer iyadoon la kulmin dhibaatooyin xagga sare ah, marka lagu daro kalooriyeyaasha oo aad u hooseeya, waxayna leeyihiin natiijooyin la yaab leh oo culeyska miisaanka si fudud ku dhaca.
Hadaad rabto inaad hagaajiso dhadhanka juuska, waxaad had iyo jeer ku dari kartaa dhowr miro cabitaanka, sida tufaax cagaaran, liin iyo liin.
Previous articleWadan ballanqaaday inuu gacan ka gaysanayo soo noolaynta adeegga Boostada Soomaaliya
Next articleDorashooyin madaxtinimo oo ka bilaabatay Afganistaan